Liverpool Oo Guul Caaqibo Leh Ka Gaartay West Ham Kulan Mane Uu Laba Gool Dhaliyay & Sturridge Oo Hal Taabasho Shabaqa Ku Gaaray. - Laacib.net
Liverpool Oo Guul Caaqibo Leh Ka Gaartay West Ham Kulan Mane Uu Laba Gool Dhaliyay & Sturridge Oo Hal Taabasho Shabaqa Ku Gaaray.
12-08-2018 Abdirashid Mohamud "SHarDinHO" Comments Off on Liverpool Oo Guul Caaqibo Leh Ka Gaartay West Ham Kulan Mane Uu Laba Gool Dhaliyay & Sturridge Oo Hal Taabasho Shabaqa Ku Gaaray.
Afar gool oo ay kala dhaliyeen Sadio Mane, Mohamed Salah iyo Daniel Sturridge ayaa guul weyn siiyay Liverpool, waxeyna garoonka Anfield Road ku ciqaabeen kooxda West Ham United kulanka furitaanka horyaalka Premier League.
Jurgen Klopp iyo wiilashiisa waxey soo bandhigeen qaab ciyaareed aan caadi aheyn, sidoo kalana Allison Becker ayaa ilaashaday shabaqiisa wuxuuna la mid yahay tiro goolhayeyaal ah oo aan lasoo taaban shabaqooda kulamada furitaanka.
Liverpool ayaa si awood leh ku bilaabatay kulanka iyadoo ka faa’ideysaneysa in garoonka Anfield lagu ciyaarayo, waxeyna bilowgii bilaabeen weeraro awood leh oo ay ku jabinayaan darbiga West Ham.
James Milner iyo Wijnaldum ayaa xasiliyay khadka dhexe kooxda iyadoo Naby Keita uu kasoo baxay waajibka ah inuu kubadda u gudbiyo weerarka sidoo kalana aad uga warqabo hanaanka baas ee kooxda.
FURSAD: Daqiiqadi 7-aad: Alexander-Arnold ayaa isku dayay inuu kubad qurux badan oo joog kore ah u gudbiyo weerarka, balse Lucas Fabianski ayaa iska feeray.
FURSAD: Daqiiqadii 9-aad: Mohamed Salah ayaa kubad ku helay xerada ganaaxa, xiddiga reer Masar wuxuu si sahlan kubad ugu gudbiyay Firmino oo goolhayaha u dhawaa, balse Antonio ayaa a qasay waxaana kubadda qabsaday Fabianski.
FURSAD: Daqiiqadii 15-aad: Isku dhiib fiican oo ay sameeyeen Anderson iyo Arnautovic ayaa sahlay iney u dhawaadaan goolka Reds, balse Van Dijk ayaa ka hor istaagay iney kubadda goosha ku aadiyaa.
FURSAD: Daqiiqadii 16-aad: James Milner ayaa isku dayay inuu kubad u gudbiyo Sadio Mane, si qurux badan ayuu u sameeyay balse xiddiga reer Senegal wuu ku fashilmay, waxaana kubadda ku dhagay Fabianski.
GOAL: Daqiiqadii 19-aad: Mohamed Salah ayaa shabaqa soo taabsiiyay goolkiisii ugu horreeyay horyaalka Premier League, markii uu si sahlan shabaqa ugu leexiyay kubad uu soo dhaafiyay goolhayaha Robertson.
BADBAADO: Daqiiqadii 25-aad: Alexander-Arnold ayaa isku dayay inuu gool labaad u dhaliyo Reds markii uu 25-tallaabo meel u jirta goolka ka tuuray laad xor ah, si cajiib leh ayaa looga beeniyay.
FURSAD: Daqiiqadii 27-aad: Wijnaldum ayaa sameeyay isku-day markii kubad dhawr jeer la isku qabsaday iyadoo la joogo xerada ganaaxa Hammers, balse geesta ayuu mariyay.
CABASHO: Daqiiqadii 32-aad: Jamaahiirta, Jurgen Klopp iyo ciyaartoyda Reds ayaa cabasho ka keenay kubad uu Ogbona ku taabtay xerada ganaaxa, waxey dhamaan isku raaceen iney tahay gacan, balse Anthony Taylor ayaa kasoo horjeestay.
BADBAADO: Daqiiqadii 40-aad: Roberto Firmino ayaa kubad ku helay xerada ganaaxa, si qurux badan ayuu ugu soo dhawaaday goolhayaha ka hor inta uusan siinin Salah, balse xiddiga reer Masar kubadii uu golka aadiyay Fabianski ayaa ka badbaadiyay.
GOAL: Daqiiqadii 45-aad: Sadio Mane ayaa shabaqa soo taabtay markii uu kubad ku taabasho u baahneyd ka helay James Milner, Anfield waxaa markaas ka dhashay goolkii labaad.
Qeybta hore ciyaarta waxaa lagu kala maray 2-0, oo ay ku hogaamineyso Liverpool, jamaahiirtii soo xaadiray Anfield ayaana daawaday ciyaar la jecleysto.
Labada kooxood waxey kusoo laabateen qeybtii dambe iyadoo Manuel Pellegrini uu go’aansaday inuu garoonka soo galiyo Robert Snodgrass kaas oo lagu badalay Declan Rice, halka Jurgen Klopp uusan wax badal ah sameynin.
FURSAD: Daqiiqadii 49-aad: Anderson ayaa isku dayay inuu kubad koornaha laga so tuuray madaxa ku caawiyo, balse Antonio ayaa awoodi waayay inuu dhameystiro.
GOAL: Daqiiqadii 53-aad: Sadio Mane ayaa dhaliyay goolkiisii labaad ee horyaalka, markii uu caawin ka helay Roberto Firmino, kusoo celiska waxaa ka muuqanayay inuu inyar ka horreeyo daafaca Hammers, balse waa la ansixiyay.
Jurgen Klopp ayaa go’aansaday inuu meesha ka saaro garoonka saddexdiisa weerar ee Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Roberto Firmino, wuxuuna garoonka soo galiyay Henderson, Sturrige iyo Xheerdan Shaqiri.
GOAL: Daqiiqadii 88-aad: Daniel Sturridge ayaa gool ku dhaliyay taabashadiisii ugu horreysay kulanka Anfield, si tartiib ah ayuuna jilibka ugu dhuftay kubad koornada ka timid.
Natiijada waxey ku dhamaatay 4-0, oo ay guusha ku raacday Liverpool – Kooxda ka dhisan Anfield ayaana hogaanka u heysa horyaalka maadaama ay dhaliyeen goolasha ugu badan isbuuca furitaanka kulamada ilaa iyo hadda la ciyaaray.